काेराेनाकाे भ्याक्सिनको मूल्य कति पर्ला ? « Media for all across the globe
काेराेनाकाे भ्याक्सिनको मूल्य कति पर्ला ?
कोरोनाको खोपको बारेमा अहिले विश्व नै लागिपरेको छ। यसको लागि विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै छलफल गरिएको छ। कोरोनाको खोप बनाउने क्रममा कतिपय देशहरू मानव परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन्।
विभिन्न देशहरुले बनाएका खोपहरु अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा अहिले यसको मुल्यको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र फार्मा कम्पनी, अमेरिकाको अमेरिकी औषधी कम्पनी, अमेरिकी फर्म फाइजर र जर्मन बायोटेक कम्पनी, चीनको चिनियाँ फार्म कम्पनी तथा रुसी सरकारले कोरोनाको खोपको लागि काम गरिरहेका छन् ।
१. अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र फर्मा कम्पनी
यो कम्पनीले बनाएको खोप अहिले तेस्रो चरणमा छ । यसको बेलायत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा परिक्षण भइरहेको छ । यसको मानव परीक्षण अगस्तको अन्त्यसम्म भारतमा सुरु हुने बताइएको छ । यो खोप भारतीय कम्पनी सीरम इंस्टीच्यूट अफ इंडियाले विकास गरिरहेको छ । यसलाई कोविशिल्ड नाम दिइएको छ । यो खोप सन् २०२१ सम्म आउने अनुमान गरिएको छ । यसको मुल्य ३ डलर पर्नेछ ।
२. अमेरिकी औषधि कम्पनी
यो खोपको तेस्रो चरणको मानव परीक्षण सुरू भएको छ । यसलाई मोर्डना नाम दिइएको छ । यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा भाइरससँग लड्न मदत गर्ने बताइएको छ । यो खोपको पहिलो परीक्षण सकारात्मक र सुरक्षित साबित भइसकेको छ । यो खोप डिसेम्बरको अन्तिम सम्ममा आउने छ । यसको मुल्य ३ हजार २ सय रूपैयाँ पर्नेछ ।
३. अमेरिकी फर्म फाइजर र जर्मन बायोटेक कम्पनी
यो कम्पनीले बनाएको फिजर बायोनटेकको खोप तेस्रो चरणको परिक्षणमा छ । यसले कोरोनालाई सक्रिय हुन नदिई शरीरको कोषहरु विकास गर्ने काम गर्छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म आउने खोपको मुल्य देश अनुसार ४ सय ८० देखि १८ सयसम्म पर्ने बताइएको छ ।
४. चिनियाँ फार्म कम्पनी
फार्म कम्पनीले बनाएको यो खोप सिनोभेक बायोटेक (कोरोनावेक) तेस्रो परीक्षणको चरणमा छ। चीनमा यो भ्याक्सिनको सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । यसको अन्तिम चरणको ट्रायल इन्डोनेशिया लगायत विभिन्न देशहरुमा भइरहेको छ । यो खोप कहिलेसम्म आउने र कति पर्ने भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।
यो खोप रूसी रक्षा मन्त्रालय र गामालेया नेशनल सेन्टर फर रिसर्च अफ एपिडेमियोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजीद्वारा विकसित गरिएको हो । रूसको पुटिन सरकारले विश्वको पहिलो कोरोना खोप तयार गरेको गरेको छ । यो खोप अक्टोबरसम्म आउने बताइएको छ । यसको मुल्य भने तोकिएको छैन् । डब्लुएचओले भने रुसको यो खोपलाई मान्यता दिएको छैन ।